Yakavanzika Gwara ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Nezvinangwa zvezvakapihwa neMutemo wataurwa pamusoro apa pamusoro pekudzivirirwa kweData rako, iro rega data raunotitumira rinozoiswa muFaira re "VASHANDI VE WEBSITE uye SUBSCRIBERS", iri muridzi we Online SL. Iyi faira yaita ese ehunyanzvi uye esangano chengetedzo matanho akagadzwa muRoyal Decree 1720/2007, pane kuvandudzwa kweLOPD.
Kutumira dhata rako pachako pane ino webhusaiti zvinosungirwa kuti ubate, utaure, unyore kune blog blog.online, kondirakiti masevhisi anoratidzwa pane ino webhusaiti uye utenge mabhuku mumadhijitari fomati.
vateveri.online ichaunganidza yega data yeVashandisi, kuburikidza nemafomu epamhepo, kuburikidza neInternet. Iyo Yega Dhata yakaunganidzwa, zvichienderana nenyaya yega yega inogona kunge iri, pakati pevamwe: zita, surname, email uye yekuwana yekubatanidza. Zvakare, panyaya yemabasa ekubvumirana, kutenga mabhuku uye kushambadzira, ini ndichabvunza Mushandisi kune rimwe bhengi kana ruzivo rwekubhadhara.
Kupindura zvinodiwa nemushandisi: Semuenzaniso, kana mushandisi akasiya ruzivo rwavo rwega mune chero mafomu ekuonana, tinogona kushandisa ruzivo urwu kupindura chikumbiro chako uye kupindura chero kusahadzika, zvichemo, makomendi kana kunetseka kunogona kumuka. zvine hukama neruzivo rwakaverengerwa muWebhusaiti, masevhisi anopiwa kuburikidza neWebhusaiti, kugadziriswa kwedata rako pachako, mibvunzo ine chekuita nemagwaro epamutemo akaverengerwa muWebhusaiti, pamwe nemimwe mibvunzo yaungave unayo.
Kuenzanisa uye kupindura kune zvakataurwa nevashandisi pablog.
Kupa masevhisi zvakanyatso kudikanwa mukusimudzira chiitiko chayo, Online SL inogovera data nevateveri vanotevera pasi pemamiriro avo ehukama akaenderana.
Maitiro ekutora ruzivo rwemunhu wega anoshandiswa nevateveri. Online :
Kutengesa zvinyorwa: Kuburikidza neiyo portal iwe unogona kutenga zvinyorwa uye infoproduct kubva Online SL, mune ino kesi, mutengi data rinodiwa (Zita, zita, uye runhare, kero yepositi uye e-.mail) kuburikidza nePaypal chikuva senzira yekubhadhara .
Vashandisi vanogona bvisa chero nguva yemasevhisi akapihwa nevateveri.online iyo iyo Tsamba.
Mune vateveri.online isu zvakare tinodzidza zvinofarirwa nevashandisi vayo, hunhu hwavo, huwandu hwemigwagwa, uye rumwe ruzivo pamwe chete kuti vanzwisise zviri nani vateereri vedu uye zvavanoda. Kuteedzera zvatinofarira zvevashandisi kunotibatsirawo kukuratidza kushambadza kwakanyanya.
Mushandisi uye, kazhinji, chero munhu wechisikigo kana wepamutemo, anogona kugadzira hyperlink kana technical link kifaa (semuenzaniso, zvinongedzo kana mabhatani) kubva kune yavo webhusaiti kune vateveri.online (iyo "Hyperlink"). Kugadzwa kweiyo Hyperlink hazvireve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati pevateveri.online uye muridzi weiyo saiti kana peji rewebhu pane iyo Hyperlink yakagadzwa, kana kugamuchirwa kana kubvumidzwa nevateveri.online yezviri mukati kana services. Chero zvazvingaitika, followers.online inochengetera kodzero yekurambidza kana kudzima chero hyperlink kune iyo Webhusaiti chero nguva.
Vashandisi vanogona bvisa chero nguva yemasevhisi anopiwa nevateveri.online iwo Tsamba imwecheteyo.
Mushandisi anovimbisa kuti iyo yega data yakapihwa kuburikidza nemhando dzakasiyana ndeyechokwadi, ichisungirwa kutaurirana chero shanduko yayo. Saizvozvo, Mushandisi anovimbisa kuti ruzivo rwese rwunopihwa runoenderana nemamiriro avo chaiwo, kuti zviri zvechizvino-zvino uye ndezvechokwadi. Pamusoro pezvo, Mushandisi anozvipira kuchengetedza dhata ravo nguva dzese, achingova nemhosva yekusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara kunogona kukonzerwa neizvi kuOnline SL semuridzi wevateveri vewebhusaiti.
Iwe unogona kutungamira yako kutaurirana uye kushandisa kodzero dze kupinda, kugadzirisazve, kudzima uye kupikisa kuburikidza neposvo tsamba pa. kana kuemail: info (pa) vateveri.online pamwe chete neyakajeka humbowo mumutemo, senge kopi yeiyo DNI kana yakaenzana, zvichiratidza mumusoro unoti "DATA ROKUDZIVIRIRA".
Mushandisi anozivisa kuti akaudzwa nezve mamiriro ekudzivirirwa kwe data rako, kubvuma uye kubvuma kurapwa kwaro ne Online SL nenzira uye nekuda kwezvinangwa zvinoratidzwa mune chiziviso chepamutemo.
Online SL inochengetera kodzero yekugadzirisa mutemo uyu kuti uugadzirise mutemo mutsva kana jurisprudence pamwe nemaindasitiri maitiro. Muzviitiko zvakadaro, Mupiro achazivisa pane ino peji shanduko dzakaunzwa nekutarisira kwakaringana kwekuitwa kwavo.
Zvinoenderana neLSSICE, Online SL haina kuita miitiro yeSAMP, saka haitumire emaimeri ekutengesa ayo asina kumbobvunzwa kana kupihwa mvumo neMushandisi, pane dzimwe nguva, anogona kutumira ayo ekushambadzira uye ekupa uye nevechitatu mapato chete muzviitiko apo iwe unemvumo yevanogamuchira. Nekudaro, mune yega yega mafomu akapihwa paWebhusaiti, Mushandisi ane mukana wekupa mvumo yake yekugamuchira yangu "Tsamba", zvisinei neruzivo rwekutengesa rwakakumbirwa. Iwe unogona zvakare kukanzura kunyorera kwako otomatiki mune iwo mamwe Mapepanhau.